Fitsaboana ny covid-19 :: Mitady mpitsabo sy mpitsabo mpanampy 324 ny fanjakana • AoRaha
Namoaka antso fitadiavana mpiasan’ny fahasalamana, izay hanampy amin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara, ny fanjakana. Mpitsabo ankapobeny miisa efatra ambin’ny folo amby zato sy mpanampy mpitsabo folo sy roanjato no amoahan’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka antso. Haparitaka any amin’ireo toeram-pitsaboana fototra (CSB) handraisana mararin’ny Covid-19 eto amin’ny faritra Analamanga sy any Alaotra Mangoro ireo mpiasan’ny fahasalamana hokaramain’ny fanjakana ireo.
Hodinihina ny fifanarahampiaraha-miasa amin’ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy vaovao horaisin’ny fanjakana ireo. « Mpitsabo dimampolo no halefa any Alaotra Mangoro ary haparitaka eto Analamanga ny efatra amby enimpolo ambiny. Ny iraika amby roapolo amby zato amin’ireo mpanampy mpitsabo kosa no halefa any Alaotra Mangoro raha toa ka hiasa eto Analamanga ny sivy amby valopolo. Hiaraha-midinika amin’ny mpiasa hokaramaina kosa ny fifanaraham-piarahamiasa hapetraka », hoy ny loharanom-baovao iray eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly.
Hanampy amin’ny fanatanterahana ny tetikasa momba ny fanjarian-tsakafo antsoina hoe « Tetikasa Fafy », izay vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola, ihany koa ireo mpiasan’ny fahasalamana telonjato mahery ireo. « Samy hafa amin’ny fanampiana amin’ny ady amin’ ny Covid-19 mihitsy ny fifanaraham-piaraha-miasa ho an’ny tetikasa Fafy. Hanasonia fifanarahana vaovao haharitra herintaona, eny am-piandohana, ny mpampiasa sy ny olona hokaramaina. Hotazonina ho mpiasa maharitra kosa izay mahafa-po, aorian’izay », hoy hatrany ny loharanombaovao.
Tsiahivina fa tamin’ny herinandro lasa teo no efa nanao antso fahalinana ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana miisa dimy amby efapolo, izay halefa any Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Diana, Ihorombe, Menabe ary Melaky, ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Mbola hitohy ny antso tahaka izao noho ny fanatevenan-daharana amin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Fantatra fa hisy indray, atsy ho atsy, ny fitadiavana mpiasa an-jatony halefa any Bongolava.
Kitra – Lalao ara-pirahalahiana :: Lavin’ny FMF ny fisian’ny lalaon’ny Barea sy Nizeria